Sacuudi Carabiya: Ma Afgambi Dhicisoobay Mise Waa Xukun-Maroorsi Horleh? – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2017 3:15 b 1
Indhawaalaba sidii Boqor Salmaan uu dhaxalka Boqortooyada Sacuudigu ugu asteeyey wiilkiisa Maxamed Bin Salmaan (MBS), siyaasadda Sacuudigu waxa ay aheyd mid karkareysa. 25kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar, kuna beegnayd maalin Arbaco ah waxaa si sir ah Sacuudiga booqashadiisii saddexaad ku tagey Jared Kushner, wiilka qaba gabadha Ivanka Trump ee uu dhalay Madaxweyne Trump. Waxa uu Washingtom DC ku soo laabtay 28kii bisha. Sida laga xaqiijey sarkaal sare oo u hadlay Aqalka Cad ee Maraykanka, waa ay dhacday booqashadu, laakiin wax faahfaahin ah lagama bixin sababta booqashada.
Jared Kushner masuuliyadihiisa badan ee uu ka hayo Aqalka Cad ee Maraykanka, waxaa kamid ah in uu yahay Lataliyaha Kowaad ee Madaxweyne Trump dhanka ammuuraha Bariga Dhexe.
Asbuuc kabacdi booqashadii Jared Kushner, waxaa Sacuudiga ka dhacay wax aan marnaba horay loo saadaalin. Waxaa habeenkii xalay ee 4tii Nofeembar la soo qabqabtay 11 qof oo wada ah tunweyntii Sacuudiga, isuguna jira tujaar bilyineero ah iyo Amiiro la wada yaqaan, adduunka iyo Sacuudigana magacyo waaweyn ku wada leh. Dhammaantood waxaa lagu eedeeyey in ay masuul ka yihiin musuqmaasuq kii ugu weynaa oo abid ka dhaca Sacuudiga.
Dadka la soo xirxiray waxaa ugu horreeya Amiir Al-Waleed bin Talaal, bilyineerka caanka ee saamiyada waaweyn ku leh shirkadda Twitter, bangiga Citibank, iyo talafishinka Fox News. Amiir bin Talaal ayaa ahaa ragga aad ugu soo horjeeday doorashada Madaxweyne Trump, waxa uuna horay bartiisa Twitterka ugu soo bandhigay sida uusan Trump u aheyn nin u qalma Madaxweyne Maraykan. Amiir bin Talaal ayaa sidoo kale waxa uu waligiis safka hore uga jiray ragga u dooda in Sacuudigu uu siyaasiddiisa bulshada badalo oo bulshada la xoreeyo, haweenkana liidnimada siyaasadeed ee lala beegsado la badalo. Waxa uu ahaa raggii ugu horreeyey ee u dooda in haweenka loo ogolaado in ay baabuurtooda si xor ah u wataan.
Tunweynta kale ee Boqor Salmaan xirxiray ama jagooyinkii ka xayuubiyey waxaa kamid ah Amiirka xukuma ciidanka Ilaalada Dalka (National Guard), Amiir Miteb bin Cabdallah, kana mid ahaa dhaxalsugayaasha Boqortooyada ee safka hore. Waxaa kale oo xilkii laga xayuubiyey Cadeel Fayeh, Wasiirka Dhaqaalaha, waxaana lagu badalay kuxigeenkiisa Maxamed al-Tuwayjeri.
Dhammaantood waxaa lagu eedeeyey musuqmaasuq aan loo dulqaadan karin. Waraysi uu horay u bixiyey Maxamed bin Salmaan (MBS), wiilka 30 jirka ah ee uu dhalay Boqor Salmaan, ahna dhaxalsugaha Boqortooyada, waxa uu yiri, “qofna sharciga kama sarreeyo haddii aad tahay amiir ama wasiir. Dadku waa isku mid.”
Saas oo ay tahay, hadana dadka falaanqeeya siyaasadda Sacuudiga waxa ay farta ku fiiqayaan in siyaasadda Sacuudigu ku dhisantahay “musuqmaasuq” sidaas darteed wax kale ayaa jira ee hawshu wada musuqmaasuq ma wada aha.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaana iyana ku fasiraya in arrinku uu laba midkood yahay. Waa midda koowaad e waa xukun-maroorsi heer gabagabo ah oo MBS uu si toos ah ula wareegayo dhammaan ilihii xukunka. Waa tan labaad e iyo ayada oo il gooni ah lagu hayo safarada soo noqnoqday iyo booqashada lamafilaanka ah ee aan hore loo qorsheyn ee Jared Kushner, lataliyaha Madaxweyne Trump ee Bariga Dhexe, waa suurtagal in MBS uu kahortagay afgambi lala maaganaa asaga iyo Boqor Salmaan.
Diblomaasi ahna qoraa sare Abukar Armaan oo falaanqeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo siyaasadda Sacuudiga, qorayna maqaalka “Yemen iyo Siyaasadda Ismiidaaminta ee Sacuudiga iyo Aamusnaanta Culimada Islaanka” asaga oo naqdinaya in tunweynta Sacuudiga musuqmaasuq lagu haysto, waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray, “hab-maamulka silloon ee Sacuudi Carabiya waa kan dhalay kaligitalisnimada, kaligitalisnimana waxaa ka dhasha burburka umado kale, illaa ugu danbeyn ay ayadu isku noqoto, iscunto, oo ay burburto.”
#SaudiArabia Unethical governance leads to tyranny, and tyranny leads to destruction of others & ultimately of self. https://t.co/0DGDIYty5e https://t.co/x5hHkfHfJm
— Abukar Arman (@Abukar_Arman) November 5, 2017
Talafishinka dowladda Sacuudiga oo ammuurtan cusub ee xirxirka iyo xil-ka-xayuubinta ka hadlay waxa laga sheegay “muhiimaddu waa in la ilaaliyo maalka iyo lacagta shacabka, la ciqaabo kuwa musuqmaasuqa wada, meekhaanka ay joogaanna dadka ku marinhabaabiyey.” Sidoo kale, Guddiga Sare ee Culimada ayaa bartooda Twitterka ku soo bandhigay “in ladagaalanka musuqmaasuqu uu yahay mid lamid ah ladagaalanka argagixisada.”
Isbaddalka siyaasadeed iyo kan bulsho ee maanta ka socda dalka Sacuudiga waa mid aan marnaba horay loo saadaalin, waana hubaal in caasumado badan mar hore saameynta isbaddalka Sacuudigu laga dareemay.
Ibahaysiga uu Sacuudigu huggaamiyo oo ay ugu horrayso dowladda Imaaraadka Carabta ayaan weli ka hadlin xariga iyo xil-ka-xayuubinta ka dhacday Sacuudiga. Sidoo kale, Dowladda Qadar oo ay indhawaalaba is hayeen dowladda Sacuudiga ayaan ayana wax war ah ka soo saarin xarriga 11 amiir iyo maalqabeeno Sacuudi ah.
Madaxwaynayayaasha dowlad goboleedyada oo hortagaya baarlamaanka
Abdulkadir Cudud Ali Gaayaco 2 years ago
Waaxas kaligitalis waxuu ku danbeeyaa burbur lkn sucuudidigu intaa adag oo waaboqortooyo boqortoyadu wayka adagtahay hogaamiy aadn boqortoyo kasoojeedin xukunakaligi talisanahaysta